PanzerGlass iko nyocha maka ngwaọrụ anyị | Akụkọ akụrụngwa
Ihuenyo nchedo ihu nyocha: PanzerGlass
Jordi Gimenez | | Ngwa, General, Mobiles, mbadamba, Telephony
Otu n'ime ngwaahịa ndị dị na ejiji na ama na mbadamba bụ ihe nchekwa ihuenyo, mana ọ bụghị ụdị nchekwa plastik na-efu ihe dị ukwuu na nke na-ata ahụhụ mmetụ nke ihuenyo ahụ ozugbo etinye, na-enye mmetụta ahụ pụọ na aka mbụ m. na-ekwu maka ndị na-echekwa iko nke etinyebere n'ụzọ dị mfe na ngwaọrụ anyị, nke anaghị ata aka ya aka ma ọlị ha na-echebe anyị nke ọma megide nkwụsị ihuenyo nwere ike ịme n’ihi ọdịda dara.
N'ahịa ahụ, e nwere ọtụtụ ụdị ndị na-enye anyị ụdị nchebe ihuenyo, ma taa, anyị ga-ahụ otu n'ime ụlọ ọrụ PanzerGlass nke ahụ na-emezu n'ụzọ zuru oke ihe ọ na-ekwu bụ iji kpuchido ihuenyo anyị site na nkwụsịtụ na akaghi aka na ọkọ.
Mgbe m gara Mobile World Congress na Barcelona na February a gara aga, agwalarị m gị na m na-ahụ ụdị ọkwa dị iche iche (na mgbakwunye na nke ukwu) bụ nke egosiri ụdị ngwa niile maka ngwaọrụ anyị na otu n'ime ha bụ PanzerGlass . N'obere obere na igwe mmadụ jupụtara na ụlọ ọrụ a na MWC, o gosipụtara ngwaahịa ya na ngwaọrụ nke onye ọ bụla na-ahụ n'anya na-achọghị ịhụ nso ngwaọrụ ha, hama na di na nwunye nke nkọ ihe ...
Mgbe ichere obere oge maka ụlọ ntu na-ekiri ngwaahịa dị iche iche ha jiri mee ihe ngosi, Agara m gwa Onye Njikwa Mpaghara maka Southern Europe, Walter Piccin, onye raara ụfọdụ oge ya dị oke ọnụ nye m n'onwe ya iji gosi m ihe Njirimara nke PanzerGlass dị mkpa ma na-eguzogide ọgwụ ma ekwenye m na ọ jisiri ike wepu agba m n'ahụ m mgbe ọ hụrụ etu o siri tinye ihe niile akọwapụtara, na Samsung mara mma na ha nwere na tebulu (isi isiokwu).
PanzerGlass siri ike ma o were Piccin na-egbu ya na hama n'ihu m. Nke a bụ ihe anyị na-anaghị eme kwa ụbọchị, ya bụ, ọ nweghị onye nwere uche ha ziri ezi ga-akụ igwe ma ọ bụ mbadamba na hama n'ihi na ee, nke na-egosi na ọ ga-anagide ọdịda site na uwe ogologo ọkpa ma ọ bụ ihe na-enweghị isi na ihuenyo na nchekwa. O doro anya na m na-ekwu na ọ na-eguzogide a ọdịda si 10 mita, ma ọ bụrụ na a nkịtị ọdịda ma ọ bụ involuntary igbu.
Ihe PanzerGlass ọ bụ naanị 0.4 mm ọkpụrụkpụ ma tụọ gram 7, Ejiri iko a gbanyere mkpọrọgwụ ya ka ọ wee nwekwuo ike ịmị ọkụ na mgbe ọ na-agbaji ọ naghị adaba, ọ na-adị ka windshield nke ụgbọ ala gbawara agbawa maka ihe nkiri na-emebi emebi, nke na-enye ohere iwepụ mfe. Ihe niile dị na PanzerGlass bụ nke a na-ahụ anya ma tinye ya na ngwaọrụ anyị, anyị agaghị achọpụta na anyị yi ya n'ihi na ọ naghị emetụta uche nke ihuenyo ahụ.
O nwekwara uru ndị a:
Ike ya dị okpukpu itoolu karịa nke kristal nkịtị. Ọbụna ihe ndị dị nkọ dịka mma, igodo, ma ọ bụ screwdrivers enweghị ike ịchacha PanzerGlass.
Oleophobic mkpuchi nke na-egbochi mkpịsị aka mkpịsị na ihe ndị ọzọ na-emerụ ahụ ma na-enye ohere nhicha nke iko ahụ.
A na-akwado PanzerGlass na nrapado silicone siri ike nke na-enye ohere ntinye dị mfe ma na-agbaso na iko ahụ n'ụzọ siri ike, anaghị emetụta ogwe aka emetụ ma hapụ ịhapụ mwepụ.
Anyị nwere ike ịsị na uru ngwaahịa a na-enye anyị dị ezigbo mma yana na iko etinyere na ngwaọrụ ọ bụla, anyị nwere ike ijide n'aka na iji ojiji nkịtị na 'ọ gụnyere' ọ ga-echebe ihuenyo zuru oke. Na mgbakwunye, enwere ike iwepụ ya ngwa ngwa ma ọ bụrụ na anyị mebie ma ọ bụ ọbụlagodi na ike gwụrụ anyị na-eyi ya, mana ozugbo ewepụrụ ya na ngwaọrụ adịghị ekwe ka iwerekwa nke ugboro abụọ ọ bụrụ na anyị nwere ike wepụta ya dum.
Anyị nwere ya maka ọtụtụ ngwaọrụ nke ụdị niile (Sony, Apple, Samsung, HTC, Black Berry, wdg) yana iji ihe doro anya na-atụ aro iji hụ nchedo ihu anyị ma ọ bụrụ na anyị nwere ntachi obi ma ọ bụ chọọ ichebe Ihuenyo si na ngwaọrụ anyị megide ike ọkọ ma ọ bụ bumps. Maka ozi ndị ọzọ ma ọ bụ ịhụ ebe anyị nwere ike ịzụta PanzerGlass anyị, anyị nwere ike ịgafe na weebụsaịtị ya ebe anyị nwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ. Ọnụahịa nke kristal a dịgasị iche dabere na ngwaọrụ anyị chọrọ ya, mana dịka ọmụmaatụ iPhone 5S ma ọ bụ Galaxy S4 / 5 anyị nwere ike ịchọta ha na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. n'etiti 27 na 29 euro ihe dị ka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Ihuenyo nchedo ihu nyocha: PanzerGlass
Etu esi tinye akwụkwọ ọkọwa okwu na Google Chrome
Etu ị ga-esi nweta bọtịnụ Firefox na nwelite nke 29